Vuze, ukukhuphela yonke into ... nkqu nobugqwetha-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Vuze, ukukhuphela yonke into ... ukuba uhlasele
Vuze, ukukhuphela yonke into ... ukuba uhlasele
Kula maxesha kunzima ukwahlula umahluko phakathi kokuyilwa kwetekhnoloji kunye nokusetyenziswa gwenxa okunokunikwa oku.
Ngonyaka wonke i-96 Hotline Connect yavela, nangona yayilixesha likaNapster (1999) xa kwakuthetha okuninzi malunga nezi zinto zibizwa ngokuba yi-P2P, mfutshane ku-Peer-to-peer, umgaqo olandelwayo apho iserver ijonge kuyo kuphela Iicompyuter ziqhagamshelwe kwaye ziyafumaneka ukuba zabelane, emva koko inethiwekhi iyaphumla.
Ndikhumbula ukuba abafundi bam basebenzise iKazaa, onokuthi ukhuphele kuyo iifayile ze-mp3 kwimizuzu embalwa, ezinye izinto zitshintshile ngokufika kweprothokholi ebizwa ngokuba yi-torrent, ekhawulezisa isantya sokukhuphela kwaye ikuvumela ukuba uhlelele ukulandwa kwamaxesha afumanekayo.
Baye badume kakhulu kuwo wonke umgca we-edonkey, obuye ubonakale uphatha imali eninzi njengoko abaniniyo befikelele kwisivumelwano kunye nerekhodi inkampani ye- $ 30 yezigidi.
Enye yezi zinto Vuze, eyenye yeenguqulelo zamva nje zeAzureus, ibamba ingqalelo yam kuba ingumthombo ovulekileyo, owakhelwe kwiJava, nje i-7MB inobunzima benkqubo yokufaka.
Ngokwewebhusayithi yabo esemthethweni, bane-70 yezigidi zabasebenzisi abaxhunyiwe, iVuze ifumaneka ngeelwimi ze20 kwaye banokukhuphela okutsha kwe-500,000 veki ... oko kuninzi.
Inokukhishwa kwi http://www.vuze.com/app .
IVuze yinkampani esekwe ngokusesikweni eCalifornia, imodeli yeshishini abayikhuthazayo kukuba abasebenzisi babelane ngeevidiyo zabo ngesisombululo esiphezulu. Ukulungiselela ezi njongo, inemisebenzi edibeneyo yokujonga ividiyo (isidlali) kwanaxa ikhutshelwa.
Ungawufumana njani umxholo
Injini yokukhangela inamandla kakhulu, kwimizuzwana embalwa inokufumana impendulo kuyo nayiphi na imfuno. Kwaye xa ndithetha "ngayo nayiphi na" kuxa icandelo "lokuyila" labasebenzisi liqala ngaphakathi kobuqhetseba okanye ishishini lamanyala.
Umzekelo, xa ubhala:
Kwimizuzwana eli-10 uluhlu lwemifudlana efumanekayo yokukhuphela iyavela, zonke zinika ithuba lokukhuphela i-AutoCAD Civil 3D 2008 ngoqhekeko kunye ne-keygen. Olunye ulwazi lokujonga ukuba yeyiphi esebenzayo ngakumbi kwaye ethembekileyo ukuba ayinazintsholongwane okanye umxholo okhohlisayo.
Ukulandela njani ukulandwa
Nje ukuba ukhuphelo luqalile, kunokwenzeka ukubona inkqubela phambili oyithathayo, inani labasebenzisi abelana ngalo, iiyure ezininzi eziza kuthatha ukulanda.
Kwimeko yomzekelo esiwubonayo, ongumfanekiso ocinezelelweyo we-1.82 GB esezantsi kwii-15 iiyure kwi-256 kbps uxhumano.
Ukuvula ubuvuvu obuvela kule modeli yeshishini kuya kuba nzima kakhulu, kuba amandla okwabelana ngezinto okanye iilayisensi zasimahla lilungelo jikelele kunye nokusikelwa umda komfundi owenza unyaka wesibini ongakwaziyo ukuhlawula i- $ 5,500 yenkqubo esemthethweni ... Ngubani owaziyo ukuba ngenye imini ndiza kugqiba.
Indlela yokukwazi ubude bekhava
Ukuqhagamshelanisa amatafula kwiMpawu
UJan Francisco uthi:
Ndiyabonga ngokubonelela ngencwadana enokuthanda ukuyilanda kule ncwadana ukuze ukwazi ukusebenzisa iqela le-sokkia. Ndiyabonga
wu lee uthi:
Kwiminyaka emininzi edlulileyo i-Microstation yayinelayisenisi yabafundi abangazange baninzi kakhulu, andiyazi ukuba iya kuqhubeka kunye nelo hlobo lelayisensi okanye cha.
I-60 ephezulu, ininzi yayifuna kwi-Geofumadas 2008